နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မလေးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Dato’ Saifuddin Abdullah အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home Appointment နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မလေးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Dato’ Saifuddin Abdullah အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: ဧပွီ 09, 2019 In: AppointmentNo Comments
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသော မလေးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Dato’ Saifuddin Abdullah အား ယနေ့ နံနက် (၁၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-မလေးရှား နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံတို့၏ ပြည်တွင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ နောက်ဆုံးအခြေအနေနှင့် နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား ပြန်လည်စိစစ်လက်ခံရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံနှင့် အာဆီယံအဖွဲ့တို့မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားသံအမတ်ကြီးနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ကြသည်။
ထို့အတူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် သည် မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Dato’ Saifuddin Abdullah အား နံနက် (၉)နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ သီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အပြုသဘောထိတွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် အာဆီယံစည်းလုံးညီညွတ်မှု မြှင့်တင်ရေးကိစ္စရပ်များ ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျနှငျ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ မလေးရှား နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး H.E. Dato’ Saifuddin Abdullah အား လကျခံတှဆေုံ့
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျနှငျ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ မွနျမာနိုငျငံ၌ ခဈြကွညျရေးခရီးရောကျရှိနသေော မလေးရှား နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး H.E. Dato’ Saifuddin Abdullah အား ယနေ့ နံနကျ (၁၀) နာရီတှငျ နပွေညျတျောရှိ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့စဉျ မွနျမာ-မလေးရှား နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု တိုးမွှငျ့ရေး၊ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ မလေးရှားနိုငျငံတို့၏ ပွညျတှငျးဖွဈပျေါတိုးတကျမှုအခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျ၏ နောကျဆုံးအခွအေနနှေငျ့ နရေပျစှနျ့ခှာသူမြားအား ပွနျလညျစိစဈလကျခံရေး လုပျငနျးစဉျတှငျ မလေးရှားနိုငျငံနှငျ့ အာဆီယံအဖှဲ့တို့မှ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျပေးနိုငျမညျ့ နညျးလမျးမြားကို ရငျးနှီး ပှငျ့လငျးစှာ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ အပွညျပွညျဆိုငျရာပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးကြျောတငျနှငျ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနမှ အဆငျ့မွငျ့အရာရှိကွီးမြား၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ မလေးရှားသံအမတျကွီးနှငျ့ မလေးရှားနိုငျငံမှ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ဝငျမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထို့အတူ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးကြျောတငျ သညျ မလေးရှားနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး H.E. Dato’ Saifuddin Abdullah အား နံနကျ (၉)နာရီတှငျ နပွေညျတျောရှိ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၌ သီးခွားတှဆေုံ့ခဲ့ပွီး နှဈနိုငျငံ ကုနျသှယျရေးနှငျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှု မွှငျ့တငျရေး၊ ရခိုငျပွညျနယျအရေးကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ အပွုသဘောထိတှပေူ့းပေါငျးဆောငျရှကျရေးနှငျ့ အာဆီယံစညျးလုံးညီညှတျမှု မွှငျ့တငျရေးကိစ်စရပျမြား ကို ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။